Ukukhucululwa Kwakhiwe Kugesi Wamandla we-Hydroelectric eMalawi - Ellicott Dredges
I-Ellicott Series 1270 Dragon® Dredge Iyasetshenziselwa Ukususa Izilima Nethangi kusuka kuHydroelectric Power Plant Reservoir
Ku-2018 i-Millenium Challenge Account of Malawi (MCA-M) inikeze u-Ellicott Dredges inkontileka enikeziwe yokuhlinzeka nge-Ellicott Series 1270 Dragon® dredge for the Kapichira hydropower plant in Malawi.
I-Millennium Challenge Corporation (MCC), okuyinhlangano esebenza nohulumeni esekwe e-US, ibisebenza ngqo nezikhulu zikahulumeni ezivela eMalawi eminyakeni eminingana eyedlule ukuthola isisekelo esiqinile lapho uhlelo lwamandla wezwe lungakwazi ukuzimela ngempumelelo ngokuhamba kwesikhathi.
Iningi lezakhamizi zaseMalawi lithembele kugesi ophehlwa ngamanzi njengomthombo wawo oyinhloko wamandla. Eminyakeni yamuva nje, ukwakheka kukasilika nodaka kukhuphukile eMfuleni iShire eduze nedamu lesitshalo samandla kagesi iKapichira. Imfucumfucu eyingozi idale ukuthi amazinga wamanzi anciphe kakhulu echibini, anciphise inani lamanzi angaqukatha, anciphise amandla ngaphambi kwezinjini zokuphehla i-hydro. I-Ellicott® 1270 cutter suction dredge kulindeleke ukuthi isize ukuthuthukisa ukukhiqizwa kwamandla kaKapichira ngokunciphisa indle echibini futhi ngaleyo ndlela inyuse inani lamanzi echibi lamanzi nokukhiqiza amandla kagesi.
I-dackge ephathekayo yokusika ephathekayo isanda kuhanjiswa kwikhasimende. I-dredge ifakwe ngamabhomu we-anchor kanye nenqola enwetshiwe ye-spud eklanyelwe ukuthuthukisa ukusebenza kahle kakhulu.